I-Mule Barn - I-Airbnb
North Utica, Illinois, i-United States
Inqolobane ibungazwe ngu-Aron
U-Aron Ungumbungazi ovelele
Isakhiwo silungiswe ngokuphelele i-Mule Barn etholakala ku-I & M Canal engokomlando. Isitolo, i- hayloft kanye nezindawo zokuhlala ezivulekile manje sekuyifulethi elithokomele elilungele ukuvakasha kwangempelasonto ukuhlola konke okuhlinzekwa yi-North Utica. Le ndlu itholakala ezindaweni ezimbili zokuhamba ngezinyawo ukusuka edolobheni lase-Utica.
Ingxenye yegalaji yenqolobane iyi-workshop yethu yokugcina epulazini nokugeza amalineni. I-Mule Barn ayinayo ikhishi langempela kodwa inayo i-microwave, i-induction burner kanye negridi kagesi.
I-Mule Barn inikeza ikamelo lokuphumula, umtapo wezincwadi, ikamelo lokulala, igumbi lokugezela lezwe kanye nokubukeka okumangalisayo kokuphila kwezwe ku-I & M Canal endala. Izitebhisi zihilelekile ukufinyelela ezindaweni zokuhlala ezisegumbini eliphezulu. Izindawo ezimbili zomlilo zinikeza izindawo zokuphumula nokufunda incwadi noma uthathe isihlwathi esidingekayo. I-Mule Barn yalungiswa kabusha ngokuphelele ngawo wonke amasevisi esimanje enomlando nomsebenzi wesakhiwo.
I-Mule Barn ayinayo ikhishi kodwa sihlinzeke ngebhodwe le-crock, i-induction burner, ibhodwe lekhofi, isiqandisi ne-microwave.
4.85 · 40 okushiwo abanye
Ipulazi litholakala emigwaqweni emibili ukusuka edolobheni lase-Utica lapho izikebhe zokudlela, iminyuziyamu namaphabhu kanye namamayela ambalwa nje ukusuka ku-Starved Rock, i-Matthiessen State Park, i-Illinois Canyon ne-Kaskaskia Canyon.
We are a family who likes to travel and see new places. We enjoy using AirBnB for the local experience and for the convenience of being able to relax in a home.
Ukungena ngaphandle kwesikhiye kuyatholakala futhi sihlala endlini uma kudingeka usizo.
UAron Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- North Utica namaphethelo